Imbali kunye neNkcubeko Iimfazwe kunye neMfazwe
Imfazwe yaseGonzales - Ukuxabana:
I-Battle of Gonzales yayiyindlela yokuvula yaseTexas Revolution (1835-1836).
Imfazwe yaseGonzales - Usuku:
I-Texans kunye namaMexico axabana neGonzales ngo-Oktobha 2, 1835.
Imikhosi kunye nabalawuli kwi-Battle of Gonzales:
UColonel John Henry Moore
ULieutenant Francisco Castañeda
Imfazwe yaseGonzales - Imvelaphi:
Ngoxinzelelo lwaluphakama phakathi kwabemi baseTexas kunye nolawulo lwaseMexico lwase-Melika ngo-1835, umphathi wamaspala waseSan Antonio de Bexar, uColonel Domingo de Ugartechea, waqala ukuthatha inyathelo lokukhubaza loo ndawo.
Enye yemigudu yakhe yokuqala yayikucela ukuba ukuhlaliswa kukaGonzales kubuyisele encinci encinci ye-canbore enikezelwe edolophini ngo-1831, ukukunceda ekuhlaseleni ukuhlaselwa kwamaNdiya. Bayazi iinjongo ze-Ugartechea, abahlali bavuma ukuguqula umpu. Emva kokuva iimpendulo zomhlali, u-Ugartechea wathumela ibutho lama-dragoons angama-100, phantsi kweLieutenant Francisco de Castañeda, ukuba athabathe i-cannon.
Imfazwe yaseGonzales - Amaqonga adibanayo:
Ukusuka kweSan Antonio, ikholomu kaCastañeda yafika kuMlambo waseGuadalupe ojongene noGonzales ngoSeptemba 29. Eyilwa nama-18 e-Texas ase-Texas, wamxelela ukuba unomyalezo kwi-alkalde yaseGonzales, u-Andrew Ponton. Kwingxoxo eyayilandelayo, i-Texans yamxelela ukuba iPonton yayingekho kwaye kufuneka ukuba balinde kwibhantshona entshonalanga ade abuyele. Ayikwazi ukuwela umlambo ngenxa yamanzi aphakamileyo kunye nobukho be-Texan militia ebhankini elide, uCastañeda wakhupha iididi ezingama-300 waza wenza ikampu.
Ngoxa ama-Mexican ahlala kuyo, iiTeans zikhawuleza zithumela ilizwi kwiidolophu ezungezile zicela ukuqinisekiswa.
Emva kweentsuku ezimbalwa, uCoushatta waseNdiya wafika ekampini likaCastañeda waza wamxelela ukuba i-Texans iqokelele amadoda angama-140 kwaye yayilindele ukuba ifike. Akazange afune ukulinda aze azi ukuba akanakuyinyanzela ukuwela e-Gonzales, eCastañeda yamkhwelisa amadoda ngo-Oktobha 1 ekukhangela enye inqaba.
Ngaloo busuku bamisa iikhilomitha ezili-7 ukuya kumlambo kwilizwe likaHezekeli Williams. Ngoxa abantu baseMexico bephumla, iiTeans zazisendleleni. Ekhokelwa nguKolonel John Henry Moore, i-Texan militia yawela kwibhantshona entshonalanga yomlambo ize ifike kwikampu yaseMexico.
Imfazwe yaseGonzales - Ukulwa Kuqala:
Ngamandla aseTexas yayingumnxeba owawathunyelwa uCastañeda ukuqokelela. Ekuqaleni kwango-Oktobha 2, amadoda kaMoore ahlasela ikampu yaseMexico ehamba ngeflegi emhlophe ephethe umfanekiso we-cannon kunye namazwi athi "Woza uze uthathe." Kuthatyiswa kukuba, uCastañeda wayala amadoda akhe ukuba abuyele kwindawo ekhuselayo emva kokunyuka okuphantsi. Ngethuba lokulwa, umlawuli waseMexico wayelungiselela u-parley noMorey. Xa ebuza isizathu sokuba amaTeans ahlasele amadoda akhe, uMoore waphendula ukuba bavikela umpu wabo kwaye balwela ukuxhasa uMgaqo-siseko we-1824.
UCastañeda watshela uMoore ukuba uvelwano kunye neenkolelo zikaTean kodwa ukuba wayenemiyalelo yokuba kufuneka alandele. UMorell wamcela ukuba alahleke, kodwa waxelelwa nguCastañeda ngelixa engathandanga imigaqo kaMongameli uAlexander López de Santa Anna, wayeboshwe ngokunyanzela ukwenza umsebenzi wakhe njengejoni. Ayikwazi ukuza kwesivumelwano, intlanganiso yaphela kwaye imfazwe yaqalisa kwakhona.
Ekubhaliweyo nangaphandle, uPastañeda wayala amadoda akhe ukuba abuyele eSan Antonio emva kwexesha elifutshane. Esi sigqibo sathinteka kwiimyalelo zikaCastañeda ezivela e-Ugartechea ukuba zingabhubhiselani ukuxabana okukhulu ekuzameni ukuthatha umpu.
Imfazwe yaseGonzales - Emva komva:
Inxulumano engenazigazi, kuphela ukubulawa kwe-Battle of Gonzales kwakuyindoda enye yaseMexican eyabulawa ekulweni. Nangona ilahleko yayingaphantsi, i-Battle of Gonzales yabonisa ukuphuka okucacileyo phakathi kwabahlali baseTexas kunye noRhulumente waseMexico. Xa imfazwe iqalile, imikhosi ye-Texan yahlasela i-Mexican garrisons kwingingqi kwaye yathatha iSan Antonio ngoDisemba. Iimpawu zaza kuhlengahlengiswa kwi- Battle of Alamo , kodwa ekugqibeleni ziza kuzinza ukuzimela kwazo emva kweMfazwe yaseSan Jacinto ngo-Apreli 1836.
I-Texas A & M: iMfazwe yaseGonzales
IMyuzi yaseMexico yaseMasta: iMfazwe yaseGonzales
Incwadi yaseTexas: iMfazwe yaseGonzales
Imfazwe yaseFranco-Prussian: Ukuvinjelwa kweParis
Imfazwe ye-1812 eMelika
Iimfazwe ze-Second Triumvirate: Imfazwe yaseFilipi
Imfazwe ye-1812: Iimangalo eziLwandle kunye nokungenakwenzeka kwiLizwe
Ukuhlasela kweViking: iMfazwe yaseMaldon
IMfazwe yase-Iraq: iMfazwe yesiBili ye-Fallujah
Izinto eziphambili ezizaziyo malunga neMfazwe yaseVietnam
I-American Revolution: I-Battle of Cooch Bridge
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseNew Orleans
Iifoto zeAura kunye neefoto ze-Kirlian
Imbali yeMikhosi ye-Junete
Rock Rock 101
Mayelana neTradio Color kunye ne-Auric Field yakho
AmaFrentshi Amagama achaza ikhaya ('la Maison')
I-Furman University ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
9 Great Pop Iingoma zePasika
Uninzi lwezenzululwazi zeCawa lama-20
Umzobo weTalantula Anatomy
Ngaba kukho emva kokufa?
Indlela yokwakha isicelo esilula se-GUI (kunye nomzekelo we-JavaFX Code)
Ama-atheists kunye nokukhipha isisu: Ukungahloneli uThixo ngeMilinganiselo yokuKhupha isisu
Kutheni i-Iran isekela uMbuso waseSiriya
I-Greater Black Superman Characters Okufanele Ibe "Kwintsimbi Yensimbi 2"
Iingcaphuno ezivela 'Intanda' nguToni Morrison
Indlela yokuthatha ngaphaya kweClassroom Midyear